Yintoni Edlula Kuwe? | Martech Zone
Izolo bendinesidlo sasemini kunye nomhlobo wam olungileyo, uBill. Njengoko sasisitya isuphu yethu emnandi yenkukhu Indawo yokutyela yaseScotty, Mna noBill saxoxa ngalo mzuzu ungathandekiyo apho ukusilela kutshintsha kube yimpumelelo. Ndicinga ukuba abantu abanetalente yokwenene bayakwazi ukubona ngomngcipheko kunye nokuvuza kwaye benze ngokufanelekileyo. Batsiba emathubeni, nokuba umngcipheko awunakoyiswa… kwaye oko kukhokelela kwimpumelelo yabo.
Ukuba ndilahlekelwa nguwe, bambelela kum. Nanku umzekelo….
Inkampani A. phuhlisa usetyenziso olulula olusebenzayo, kodwa luswele zonke iimpawu eziyimfuneko kwixesha lokuqala. Xa kuvela ithuba lokuya entloko ngokuchasene nokhuphiswano, iNkampani A iseta okulindelweyo kwaye igqibe ngexesha elinobundlongondlongo lokuphuhlisa amanqaku aseleyo ayimfuneko ukugqiba ikhontrakthi. Okwangoku, ngaphandle kwesisombululo, bayangena kwiingxoxo kwaye bathengise.
Inkampani B uyalibona ithuba, kodwa uyazi ukuba awanako ukuhlangabezana neemfuno zesicelo sesicelo, ke ngoko ngobunono baqubuda kwaye bazinza ngokuzolileyo phambili nesicwangciso sabo sokugqibelela nolawulo lwehlabathi.
Yiyiphi inkampani echanekileyo? Inkampani A ithatha umngcipheko omkhulu ngesivumelwano kunye nomthengi. Babeka emngciphekweni igama labo nakushishino. Ngapha koko, kukho ithuba elihle lokuba baya kufumana uninzi lomsebenzi owenziweyo kodwa ayisiyiyo yonke. Inkampani B ayikaze iyibeke etafileni, kwaye inyani yokuba bengakhange bayifumane ikhontrakthi inokubabeka phantsi ngaphambi kokuba iNkampani A igqibe.
Kwixesha elidlulileyo, injineli egcinakeleyo ngaphakathi kum ngeyayindwebile kwiNkampani A kwaye ngekhe ndibahloniphe ngokubathembisa nangaphaya kokuhambisa. Kodwa amaxesha atshintshile, akunjalo? Njengabathengi beshishini, sihlala sizixolela ngakumbi iinkampani ezingakwaziyo ukwenza ixesha elimisiweyo okanye zize nezinto ezifutshane. Senza oko sinako.
IIMHO, Inkampani B ayimi ndawo kule mihla. Ndiqala ukukholelwa ekubeni amandla okufika kwintengiso kwangoko kwaye ubhetyebhetye kwimveliso yinto eza kukwenza uphumelele. Ukuba kukho ithuba lokuphumelela, kuya kufuneka usoloko uzama. Ngaphandle koko, eli thuba liya kudlula kuwe.
Kuyinyani ngemisebenzi, kuyinyani kwizivumelwano, kwaye kuyinyani kwintengiso. Ukuba ulinda ukuyila iphulo elifanelekileyo, ngekhe ube nethuba lokuyivula. Pha is umda ofanelekileyo phakathi kokugqibelela kunye nesantya. Ukuba ungahambisa kancinci, kodwa uhambise rhoqo, uya kulithatha ishishini.
Ukuba bendinokwenza uthelekiso, kuya kufuneka ndithathe okucacileyo, iApple xa ithelekiswa neMicrosoft. IVista yayiyiminyaka enkulu yokukhululwa ekulindeni. Ingwe, kwelinye icala (endiyicwangcisileyo izolo) kubonakala ngathi yinto entle yokucebisa kwi-OSX. UMicrosoft uqalise i-XBox 360, inkqubo yemidlalo yemultimedia egcwele zonke iintsimbi kunye neempempe. IMicrosoft iphehlelela iZune, isidlali semidiya esihle kakhulu, esikrwecwe kakhulu esingakhange sikrwempe imarike. Okwangoku, iApple iphehlelela i-iPod, i-iPod Shuffle, i-iPod Nano, i-iPod Nano, iMic Mini, iiCinema Displays, iAppletv, i-iPhone, iiPods ezinemibala, i-iPod Touch, iMac, i-OSX Leopard… uyaqala ukubona ukuba kwenzeka ntoni?
IMicrosoft inemijikelezo emikhulu, ecothayo eneendawo eziphakamileyo ezinzulu kunye neelows ezinkulu kakhulu. I-Apple ibinemiceli mngeni nayo, kodwa ngaphambi kokuba iApple ibenokuphendula okanye ibe neentloni ixesha elide ngokwaneleyo, baqalisa into entsha. U-Apple akayithethi unyaka njengoko iMicrosoft isenza, bayakhohlisa amarhe apha okanye phaya emva koko baqalise. Kwaye ingathi baqala veki nganye! Abantu baxolela iziphene zenguqulo yokuqala (indleko kunye nomgangatho) kwaye ngovuyo baya kuhlobo lwesithathu nolwesine. Ixesha lethu lokujonga lifutshane kwaye iApple iyisebenzisa ngokuqaqambileyo.
Uvumela ntoni ukuba udlule kuwe? Yeka ukulinda izinto zigqibelele ukungena ngaphakathi. Tsiba namhlanje okanye ubukele ithuba likudlula. Yiyo kuphela indlela oya kuthi uphumelele ngayo okanye ishishini lakho.
Qaphela: Ezinye zeenkcukacha zam kwi-Apple ziphefumlelwe yile Iposti enkulu kwimpumelelo ka-Apple kwi-Fireball enobungqina.
tags: KuqeshwaIsicelo sokuqeshwaamakhadiamakhadi ekrisimesicinefiniGoogle plus infographicgoogle kunye neenkcukacha mananiamakhadi eeholideixesha leholideindianapolisUJonathan salem basketinishedyuli ekwi-intanethiUkucwangciswa kwe-Intanethiishedyuliiibhukumaka zentlaloibha ephezulu
Oktobha 25, 2007 ngo-3: 05 PM
Inkampani A ukuza kuthi ga ngoku inendlela eyiyo. Intetho ethi “Kungcono ukuba ibe ngama-80% namhlanje kunaku-100% ngomso” ayikaze inyaniseke ngakumbi kunanamhlanje. Isantya esanda ukwanda kwezinto ezenzeka kwilizwe leshishini siyaqhubeka ukundimangalisa.